Iingoma kunye ne-Music Sheets Music ku-Popular Folk Children Songs
Umculo womculo ngumculo wendabuko oye wahanjiswa kwisizukulwana kwisizukulwana. Olu hlobo lomculo lubhaliwe kwaye lubonisa ilifa lelizwe. Ngokuqhelekileyo kuculwa kwaye kudlalwa ngabaculi abanokuthi bangaqeqeshwa ngokufanelekileyo okanye bangaqeqeshelwa umsebenzi. Izixhobo eziqhelekileyo ezisetyenziswa kumculo womculo ziquka ama-accordions, i-banjos kunye ne-harmoniki. Abaculi abanjengoPercy Grainger , uZoltan Kodaly, kunye noBela Bartok babengumqokeleli weengoma zomculo.
Kwiimeko ezininzi, iingoma kwiingoma zengoma zivela kwiimvumi zengqungquthela okanye izibongo, kwaye ezinye zeengcamango zengcebele zahlukahluka, kuxhomekeke kummandla okanye ngexesha. Ngaloo ndlela, akufanele kusimangalise ukuba ezi ngoma zineengoma zihluke kakhulu kwalabo obaziyo.
Izindlela zemfundo ezifana ne- Orff kunye ne- Kodaly zisebenzisa iingoma zomntu ukuze zifundise iingqiqo ezibalulekileyo, ukukhuthaza umculo kunye nokuhlonipha ilifa lemculo. Ngaphantsi kwe-19 iingoma zabantu abazithandayo kakhulu kunye namazwi abo kunye nomculo womculo wokufunda nokucula.
I-Aiken Drum (iNgoma yaseScottish yaseKapa)
I-Aiken Drum ingumntu waseScotland Folk Song nge-Battle of Sheriffmuir. Kwakhona ngamanye amaxesha kuthethwa njengengqungquthela elula yolondolozo. Amazwi alandelayo:
Kwakukho umntu owayehlala enyangeni, ehlala enyangeni, ehlala enyangeni,
Kwakukho umntu owayehlala enyangeni,
Kwaye igama lakhe linguAiken Drum.
Kwaye wadlala kwi-ladle, a ladle, a ladle,
Kwaye wadlala kwi-ladle,
Yaye isitya sakhe senziwe nge-cream cream cheese, ye-cream e-cheese enhle, ye-cream cream,
Yaye isitya sakhe senziwe nge-cream cream cheese,
Yaye ingubo yakhe yenziwe yenkomo enqatyisiweyo, enesilwanyana esilusiweyo esihle,
Yaye ingubo yakhe yenziwe yenkomo enqatyisiweyo,
Kwaye amaqhosha akhe awenziwe ngezonka zesonka, zezonka zeepeni, zezonka zeepen,
Kwaye amaqhosha akhe ayenziwe ngezonka zeepen,
Yaye ikhwebo yakhe yenziwe ngamagqabha, i-pie, i-pie,
Yaye ikhwebo yakhe yenziwe ngamagqabi,
Kwaye iibhakethi zakhe zenziwe ngeengxowa ze-haggis, zeengxowa ze-haggis, zeengxowa ze-haggis,
Yaye ama-breeches akhe ayenziwe ngeengxowa ze-haggis,
U-Alouette ingoma yaseFrancis-yaseCanada ingoma yokucoca iintsiba kwi-lark, emva kokuvuswa yingoma yayo. Iinguqulelo zesiFrentshi kunye nesiNgesi zilandelayo:
I-plumerai la tete
Yonke into, kunye nale nto
Lark, enhle (okanye othandekayo) uLark
Lark, ndiza kukunqumla
Ndiya kunqumla intloko yakho,
Yaye intloko, nentloko,
I-A-Tisket A-Tasket (1879)
Le ngqungquthela ye-nursery yenziwe eMelika kwaye isetyenziswe njengesiseko so-1938 uEla Fitzgerald ukurekhoda. Okokuqala kubhalwe ngasekupheleni kwekhulu leshumi elinesithoba, le ngoma ibe ngumdlalo weengcamango zabantwana xa kuthethwa ngelixa abantwana bebetha ngeesangqa. Amazwi alandelayo:
Ibhasikidi eluhlaza kunye nephuzi
Ndabhalela ileta lwam uthando
Kwaye ndisiya endleleni,
Kwaye ndisiya endleleni.
Yifake ephaketheni lakhe. 
Kweminye imihluko, iimilo ezimbini zokugqibela zifundeka "Ibhinzana elincinane lithatha / lithatha emakethe.
I-Baa Baa Black Sheep (1765)
"I-Baa Baa Black Sheep" yayingumxholo wesiNgisi ozalisekileyo, obizwa ngefomu ekhankanyiweyo, unokubuyela emva kwangaphambili ngo-1731. Amazwi alandelayo:
Baa, baa, izimvu ezimnyama,
Ewe nkosi, ewe nkosi,
Iingxowa ezintathu zizele.
Yaye enye yinkwenkwana
Ohlala phantsi kwindlela.
Iingoma zomculo (PDF)
UFrere Jacques (1811, iNgoma yesiFrentshi yesiNgesi)
Le ngqungquthela eyaziwayo yaseFransi idla ngokuqhelekileyo idlala ngokujikeleza kwaye iguqulela "uMzalwan 'uJohane" ngesiNgesi. Ngezantsi iinguqu zamaFrentshi kunye nokuguqulelwa kwesiNgesi.
UFrère Jacques, uFrère Jacques,
Ngaba ulele, ulala?
Mzalwan 'uJohn, Mzalwana uJohn?
Iingqungquthela zaseMasa zikhala,
Iibhokhwe zasekuseni ziyakhala
Apha Sasihamba Nge-Bush Mulberry Bush (1857)
Ngokufanayo "neevili kwiBhasi", le ngqungquthela yokunyamezela nayo iyimidlalo yokucula kubantwana. Ukudlala, abantwana bayabamba izandla baze bajikeleze ngesangqa ukuya kwimiba elandelayo. Amazwi alandelayo:
Apha sihamba ngeenxa zonke kwisihlahla se-mulberry,
Apha sihamba ngeenxa yehlathi le-mulberry
Ngoko kusasa ekuseni.
Nantsi indlela esihlamba ngayo ubuso bethu,
Geza ubuso bethu,
Geza ubuso bethu.
Nantsi indlela esihlamba ngayo ubuso bethu
Nantsi indlela esidibanisa ngayo iinwele zethu,
Hlanganisa zethu iinwele,
Hlanganisa zethu iinwele.
Le yindlela esidibanisa ngayo iinwele zethu
Yile ndlela esiyichitha ngayo amazinyo,
Yile ndlela esiyichitha ngayo amazinyo
Le yindlela yokuhlamba iimpahla zethu
Geza iimpahla zethu, hlamba iimpahla zethu
Ngomso ngoMsombuluko kusasa
Yile ndlela esibeka ngayo iimpahla zethu,
Gqoka iingubo zethu,
Gqoka iingubo zethu.
Le yindlela esibeka ngayo iimpahla zethu
Ngoko kusasa ekuseni
Unayo Ihlabathi Elipheleleyo Kwizandla Zakhe
"Unayo Ihlabathi Lonke Ezandleni Zakhe" ngumoya waseMelika womoya owawushicilelwa kuqala njengomculo oshicilelweyo ngowe-1927. Amazwi alandelayo:
Unayo ihlabathi lonke ezandleni Zakhe
Unomntwana omncinci umntwana ezandleni zakhe
Unabantakwabo nabazalwana bam ezandleni zakhe,
Unayo ihlabathi lonke ezandleni Zakhe.
Ikhasi kwiRange (1873)
Iingoma kule ngoma yomntu zaqala ukupapashwa njengombongo kwi-1870s. Amagama angamaBrewster Higley kunye nomculo uvela kuDaniel Kelley. Amazwi alandelayo:
O, ndinike ikhaya apho ibhokhwe ihamba khona,
kunye ne-deer kunye ne-antelope,
Xa kungekho nto evezwa ilizwi elidimazayo
Kwaye isibhakabhaka asinamafu onke imini.
Ikhaya, ikhaya kwibala,
Apho inyamazane ne-antelope idlala;
Lapho umoya ucocekile, i-zephyrs ikhululekile,
Imisindo ilula kwaye ilula,
Ukuba andinakutshintshisana nekhaya lam kwibala
Kuba zonke izixeko ziqhakazile.
Indoda ebomvu yayicinezelwe kule nxalenye yeNtshona
Mhlawumbi akayi kuphinda abuyele,
Kwiibhanki zoMlambo obomvu apho kunqabile ukuba kukho
Umlilo wabo oqhaqhazelayo uvutha.
Zingaphi ebusuku xa izulu likhanya
Ngokukhanya okuvela kwiinkwenkwezi ezikhazimulayo
Ngaba ndimi apha ndamangaliswa ndaza ndabuza njengoko ndikhangele
Ukuba ubuqaqawuli babo bugqithileyo ngaphezu kweyethu.
Owu, ndiyayithanda le mihlaba yasendle apho ndihamba khona
I-curlew Ndiyathanda ukuva ukukhala
Kwaye ndiyakuthanda amatye amhlophe kunye nemvuyo ye-antelope
Ukudla kwintlanzi eluhlaza.
O, ndinike ilizwe apho isanti edayini yedayimani
Uhamba ngokukhawuleza phantsi komlambo;
Apho i-swan ephakazelisayo imhlophe iyahamba
Njengentombi ephupha ezulwini.
I-London Bridge iyawa phantsi (1744)
Iingoma zamaNgesi zesiNgesi eziye zaqala ukuba le ngoma ingahle zibuyele kwikhulu le-17, kodwa iimvumi zangoku kunye neengoma zaqala ukupapashwa kunye ngo-1744. Bona iincwadana ezilandelayo:
ILondon yaseBondon iyawa,
Ukuwa phantsi, ukuwa phantsi.
ILondon yaseLondon yaphulwa,
Iphulwe phantsi, yaphulwa.
Yakha ngeenkuni nodongwe,
Ubumba nodongwe, umthi nodongwe,
Umthi nodongwe uya kuhlamba,
UMariya wayenomvana Omkhulu (1866)
Kwimvelaphi yekhulu le-9, le ngoma ye-nursery yaseMelika ekuqaleni yayiyimbongo kwaye yapapashwa kuqala eBoston. Amazwi kwisigqi nguSarah Josepha Hale alandelayo:
UMariya wayenemvana elincinane, imvana,
imvana, uMariya wayenemvana
oboya babo babemhlophe njengekhephu.
Kwaye yonke indawo uMariya waya kuyo
UMariya waya, uMariya waya kuyo yonke indawo
ukuba uMariya waya
Imvana yayiqiniseke ukuba iya.
Wamlandela esikolweni ngolunye usuku,
esikolweni ngolunye usuku, esikolweni ngolunye usuku,
Yintoni echasene nemithetho,
Yenza abantwana bahlekise baze badlale,
ukuhleka nokudlala, ukuhleka nokudlala,
Ukubona imvana esikolweni.
Kwaye ke utitshala waphenduka,
Kodwa ke, yahlala kufuphi,
Kuze uMariya avele.
"Kutheni imvana imthanda uMariya?"
Uyamthanda uMariya ngoko? "Uyamthanda uMariya?"
Abantwana abanomdla bayakhala.
"Kutheni uMariya ethanda imvana, uyazi,"
imvana, uyazi, "imvana, uyazi,"
UMdala MacDonald wayeneFama (w. 1706, m 1859)
Enye yeengqungquthela ezithandwa kakhulu, le ngoma yabantwana iphathelele umlimi kunye nezilwanyana zakhe kwaye isebenzisa izandi ezilwanyana. Amazwi alandelayo:
Umdala waseMacdonald wayenefama, i-EIEIO
Kwaye efama, wayenenkomo, EIEIO
Nge "moo-moo" apha kunye "apho-moo" apho
Apha "indawo" apho "apho"
Kuyo yonke indawo "apho-moo"
phinda kunye nezinye izilwanyana kunye nezandi zabo
I-Pop iya kwi-Weasel (1853)
Inguqu yokuqala yale ngoma yenziwe ngawo-1850, kodwa inguqulo epapashwe yenziwe ngo-1914 kwisixeko saseNew York. Ingcaciso yoma ngoma iguqulela "ukuhamba ngokukhawuleza." Ingqungquthela yamazwi ilandelayo:
Ujikeleze kwaye ujikeleze ibhentshi yesikhumba
(okanye yonke indawo ejikeleze i-mulberry bush)
Ikhumba yaxosha i-weasel,
Isilwanyana sicinga ukuba 'sonke siyonwabile
Pop! Uhamba kwi-weasel.
Ipenny ye-spool yomtya
Yile ndlela eya ngayo imali,
Ingqungquthela Ejikeleze Imida
Le ngoma yokuqala yabonakala ngokushicilelwa ngowe-1881, kodwa ikwabikwa ukuba sele ihlaziywe kwinguqulelo ecaleni layo langoku kwi-1790s. Ingqungquthela yamazwi alandelayo ngezantsi:
Bhala ngeenxa zonke
I-pocket egcwele iipolisi;
UKumkani uthumele intombi yakhe,
Ukutsala i-pail yamanzi;
Umzila Wemizila Yenza I-Boat Your (w. 1852, m. 1881)
Uthiwa njengengoma ephuma e-American minstrelsy, le ngoma yathandwayo yabantwana kunye neengcambu zengceya zidlalwa njengeenxa zonke kwaye ngezinye izihlandlo ziquka ukudlala kwendlela yokudlala. Ingoma ivela ngo-1852 kwaye ukurekhoda kwangoku kwadalwa ngo-1881. Iingoma ezilula zilandela:
Umqolo, umgca, umgca wakho umkhombe
Ngobubele, ngokuvuya, ngokuvuya,
Ubomi luphupha nje.
Uya Kuba Ngqele '' Ujikeleze Intaba (1899)
UKarl Sandburg washicilela le ngoma ngowe-1927. Le ngoma yesiqhelo yendabuko isetyenziswa njengengoma yabantwana kwaye ekuqaleni ivela kwingoma yamaKristu, "Xa i-Chariot iza." Ingqungquthela yamazwi alandelayo:
Uya kuza entabeni xa efika
Uya kuza entabeni, uya kuza entabeni,
Uya kuqhuba amahashe amhlophe amathandathu xa efika
Uya kuqhuba amahashe amathandathu amhlophe, uya kuqhuba amahashe amathandathu amhlophe,
Iingoma zomculo (Khuphela)
Ingoma yabantwana abathandwayo kuthiwa yayingumlingani-weba umdlalo womdaniso owaziwayo kwi-1840s, kwaye kungenzeka ukuba uAbraham Lincoln wadansa kuyo. Iingoma zilandela kwinqanaba:
Ulahlekelwe lam iqabane,
Ndiya kwenza ntoni na?
Dlulela kwindawo yam, dakarlin '.
Yeka, yehla, weba kuLou,
Dlulela kuLou, i-darlin 'yam.
Ndithathe Umdlalo weBhola (1908)
"Ndikhuphele kwiBhola" yayingoma yeTin Pan Alley ingoma evela ngo-1908, eyaba yinto yokucula ingoma kwiimidlalo zebhola, kunye neengoma ezidumile zabantwana. Amazwi aninzi abantu abaculayo ngoma ingoma yileyona ingoma yexesha elide. Umzekelo wamazwi alandelayo:
Ndikhuphe kumdlalo webhola,
Ndikhuphe kunye nesihlwele.
Ndithenge amantombazane kunye neCracker Jack,
Andikhathalele ukuba andiyi kubuya,
Makhe ndibe yingcambu, ingcambu, ingcambu yeqela lekhaya,
Ukuba abayiphumeli lihlazo.
Kuba enye, emibini, emithathu imbetha, uphume,
Kumdlalo omdala webhola.
Iimvumi ezintathu eziyimfama (1609)
Kushicilelwe amakhulu eminyaka edlulileyo, le ngoma iguquke kwiingoma kwaye iguqulelwe ngabaqambi abaninzi. Namhlanje liyimvumi eyaziwayo yoluntu kunye nomjikelezo womculo. Amazwi alandelayo:
Iimvumi ezintathu eziyimfama,
Iimvumi ezintathu eziyimfama
Bona indlela abagijima ngayo,
Bona indlela abahamba ngayo!
Bonke baleka emva
Wawunqumla imisila yawo
Eyona nto ebomini bakho
Njengeentlanzi ezintathu eziyimfama?
I-Twinkle Twinkle Little Star (1765)
Le ngoma ethandwa ngabantu ithatha isandi sayo kwingqungquthela nguJane Taylor, eyapapashwa kwifomu yengoma ngo-1806. Amazwi angezansi:
Ukupheka, ukuphazela, inkwenkwezi encinci,
Ndiyazibuza ukuba ungubani!
Phezulu phezulu kwehlabathi,
Xa ilanga livutha,
Emva koko ubonisa ukukhanya okufutshane,
Ukupheka, ukuphazela, ubusuku.
Emva koko umhambi ebumnyameni
Ndiyabulela ngenxa ye-spark yakho encinci;
Wayengakwazi ukubona indawo eya kuyo,
Ukuba awuzange uphazamise.
Ebusini obumnyama obumnyama, ugcina,
Kwaye ngokuqhelekileyo ngamaphethini am,
Kuba awunakuvala iso lakho
Kuze kube ilanga lisezulwini.
Njenge-spark yakho eqaqambileyo encinane
Ukhanyisa umhambi ebumnyameni,
Nangona andingazi ukuba ungubani,
Ukukhwankqisa, ukuphosa, inkwenkwezi encinane.
Iingoma zeengoma kunye neeCD
De Colores kunye nezinye iingoma zeLatin-American Folk Children.
Ujikeleze iWorld Songbook.
150 Iingoma zeMerika zaseMelika: Ukucula, ukufunda nokudlala.
Izwe lethu lokucula: Iingoma zeeNkcubeko kunye neBallads.
I-Family Great Songbook - Thelekisa amaxabiso.
Iqoqo leMculo ye-Smithsonian Folkways yabantwana.
Iingoma zeNkcubeko zezilwanyana
Ukubhiyozela Umntwana Womculo womculo.
Iingoma zomculo Isifundo: Ziziphi iiHarmonic Intervals?
Itheyibhile yeTyikityi eYiNtloko: Ndingayazi njani isiKhulu?
Ziziphi iindawo ezihlaselayo kunye nokuzikhusela kwiqela lebhola?
Yintoni i-NLHE Poker?